कवि त्रिलोचन र सिर्जनाको सँगालो
मेरा बालसखाः कविताका तन्नेरी प्रेमी
जीवन अनुभवहरूको अलिखित किताब रहेछ । अहा, जीवनमा यति खुसीको पल पनि आउँदो रहेछ नि मित्र ! समयले रङ बदलेर पनि हामीलाई नचिन्ने बनाउनै सकेन । आँखाभरि जीवनका सुन्दर सपना बोकेर धुलामा हामीले मिलेर रोपेको ‘क’ आज फुलेको छ रहरहरूमा । आँपटारी, भालुझोडा, चिल्लागढ–पोखरी, झारबारी, ढकालपुर र ब्याङ्डाँडाका पुराना बालवयी स्मृतिबिम्बहरू आज मेरा मानसपटलमा नाचिरहेछन् । अमला चपाउँदै, किम्बुमा रमाउँदै, सिमलेका गाडीमा चढेर हामी एकसासमा भगवती स्कुल पुग्थ्यौँ । सियामा मकै हालेर होस् या बाटामाथिबाट घाँस ल्याएर होस् चन्द्रा, शेषलाल, दुर्गा, बद्रीमाया, निधिकान्त र ज्ञानुहरूभन्दा अगाडि नै स्कुल पुगेर हामी हाँस्थ्यौ जितेकामा मख्ख परेर । जीवनका ती स्वर्णिम बिहानी अब घुर्मैला यादका तरेली बनेका छन् । मित्रलाल, विष्णु, हरिश्चन्द्र र यादवहरूका याद पनि अब इन्द्रेणी–छाँयामा समाहित बनेका छन् । गुरु प्रेम न्यौपाने र विनोद दाहालका मायाले हाम्रा अक्षरमा ज्यान पसेको हो । दधिराम र पोखराज सरका शीतल छाँयाले हामीभित्र जीवनको आस्था र आस्थाको सगरमाथा उभिएको हो । बुद्धि सर र गोविन्द सर र सबै गुरुजनहरूका स्नेही स्पर्शले हामीमा ज्ञानग्रहण गर्ने उत्प्रेरणको अविरल निर्झरिणी बगेको हो ।
हो, आज म सिर्जनाको ‘सँगालो’–का विधाता स्रष्टा मित्र त्रिलोचन भण्डारीसँगको त्यही बालवयी मैत्रीको अतीतमा चुलुम्म डुबेको छु, जोसँग भगवती स्कुलको कखरादेखिको अक्षरयात्राका सुनौला दुईहजार दिनले बाँधेको सम्बन्ध आजसम्म झाङ्गिएकै छ । कविमित्रको जीवनको स्वर्णयात्रामा प्रस्तुत मुटुको आवाजले एउटा नवीन परम्परा पनि कायम गरेको छ । हल्लाखल्ला गरेर र बत्ती निभाएर आफ्नो जन्मोत्सव मनाउने उल्टीमतिहरूका लागि भण्डारी गुरुको कोमल चट्कनले तरङ्ग ल्याउने छ अवश्य । आजभोलि मेरा बालापनका तिनै कमबोलुवा र लजालु साथी आज कविताका परिपक्व प्रेमी बनेर देखिएका छन् ।
सिर्जनाको सँगालोः सचेत भावनाको न्यानो अँगालो
कविता मुटुको सम्बोधन हो । यसको भाषाशैली असामान्य प्रकृतिको लाग्छ हामीलाई । कवि आप्mना असन्तुष्टि र विद्रोहका आवाजहरूलाई पनि कलात्मक बनाएर सम्प्रेषण गर्छन् । यसको गणित दुनियाँबाट अलि पृथक् हुन्छ । फूलमा आगो देख्छ कवि, पानीमा ढुङ्गा । सामाजिक न्यायको पक्षमा दृढता हाम्रा कविको आस्था हो,
न्याय मरेको देशमा बाँचेको छु,
छियाछिया भएको मुटु,
जबर्जस्ती सिलाएर हाँसेको छु,
कञ्चनपुर दुखेको दुख्यै छ,
सत्यता लुकेको लुक्यै छ, (बलात्कृत छोरीप्रति)
मित्र कवि भण्डारीले यस्तो अचम्मको काव्यिक विधालाई सुन्दर शैलीमा हाम्रो समाज र हाम्रा सामाजिक दायित्वहरूसँग जोडेर हामीसमक्ष प्रभावी बनाएर पस्किएका छन् । नवीनपुस्ताको प्रविधिमोह, राजनीतिको अराजक अनुहार, विकृतिमाथि सप्रिएको अमानवीय आचरण र खस्किँदै गएका मानवीय मूल्य र मान्यताहरूजस्ता सामयिक सन्दर्भहरूलाई सुन्दर शब्दशैयामा संयोजन गरेका छन् कविले ।
राजनैतिक स्थिरतासँगै द्वन्द्वका घाउहरू निका होलान् भनी पर्खिएका बाआमाहरूका निराश मन र आँखाका आँशुलाई सम्बोधन गर्छन् कवि,
न धर्तीमा सास भेटिएको छ,
न बस्तीमा बास देखिएको छ,
न अज्ञातस्थलमा लास तेर्सिएको छ,
फर्कने सबै आशाहरु मेटिएको छ । (...बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झनामा)
आजको किशोर पुस्तालाई कविको उत्प्रेरक सन्देश कति नरम र खँदिलो,
आशाका किरणहरु बालेर अहोरात्र,
अन्धकारका ढोकाहरु उघार्दै जाऊ,
असीमित छन् तिम्रा भविष्यका सम्भावनाहरु,
विकृति र विसङ्गतिहरु चाहिँ पछार्दै जाऊ । (सन्देश मेरा नानीहरूलाई)
हामी कर्तव्य र दायित्वबाट कसरी स्खलित हुँदै गएका छौं भन्ने गम्भीर विषयमाथि घोत्लिन बाध्य बनाउँछन् कवि भण्डारी सँगालाभरि नै । भावनामा बहकिँदा पनि घर, परिवार र समाजप्रतिको दायित्व बिर्सन दिँदैनन् यी कवि । दायित्वबाट स्खलित आजका दौंतरीहरूलाई कविताका झटाराले घुँडीखोप्रामा हानेरै पनि सामाजिक उत्तरदायित्व सिकाउँदैछन् भण्डारी गुरुले, हैन त डामकुमारजी ?
हाम्रा कवि अलि हतारिए सायद । विधाहरूको क्वाँटी पनि स्वादिलै त छ, तर पर्खेर विधागत विशिष्टताकै आस्वादन दिन सक्थे यी कविले । हो, विचित्रको विधाचित्रको प्रस्तुति बनेर आएको छ सिर्जनाको सँगालो । स्तरीय कविताहरूको लहरसँगै अघि बढेको सँगालोमा पाठकले बहुस्वाद प्राप्त गर्नेछ, क्रमशः सरल बालसन्दर्भका कोपिला–सिर्जना, मुक्तशक्तिका चोट्टे र छोट्टे सिर्जना, गजलगाजलुसँगै जीवनचिन्तनका भजनभाजनका साथ । यो कविको रहर मात्र होइन, दायित्वको प्रहर पनि हो । जीवनका हरमोढहरू आउने मनका भावहरूलाई सन्तुलित ढङ्गले अक्षरमा कुँदेर, विधाबद्ध गरेर आफ्नो काव्यिक स्तरको परीक्षणसँगै चिन्तनका गुरुहरूका सामयिक विषयमाथिका हस्तक्षेपपूर्ण अभिमतहरूको सम्प्रेषण पनि हो यो । सन्देशमूलकता र सकारात्मकता कवि भण्डारीका मुख्य कवितागत पहिचान हुन् । उनी शब्दका घोडीमा चढेर पाठकतिर नहेरी धाइफल ठोक्ने कवि होइनन्, बरु समाजमा, आफ्ना आँखैअगाडि देखिएका विकृतिहरूलाई टपक्क टिपेर सार्वजनिक गर्छन् र सफाइका लागि उत्प्रेरित गर्छन् । उनी सङ्ग्रहमा जीवनका ऊर्जाशील वसन्त गुजारेको गुरु–वयलाई आफ्ना भावी सन्ततिप्रति नूतन र उपयोगी सन्देशका लागि प्रयोग गर्छन् । चेतनाको दीप बालेर बस्तीबस्तीमा कविका शब्द–सन्देशहरू पुग्नेछन् । म कवि मित्र त्रिलोचनको यस यात्राको साक्षी बनिरहन पाउने अपेक्षा गर्दछु ।
छ दर्जन हाराहारी सिर्जनाहरूको सुन्दर माला बनेको छ यो सँगालो । यहाँ बाल, किशोर र प्रौढ पुस्ताको स्वादअनुरूपका रचना छन् । कवितासँगै गीत, गजल, मुक्तक र भजनको स्वाद लिन पाउनु हाम्रा लागि काइदाको कुरा त हो नै । प्रथम यात्रामा तयारीको पूर्णता नहुनु स्वाभाविक हुन्छ । हामी जात, नाक, भात र नश्लले हैन, सुकर्मले मात्र मानिस महान् हुन्छ भन्ने चेतनाबाट भर्खर अघि बढिरहेछौं । कविताकर्मले कवि त्रिलोचनलाई तानिरहोस् । भाव र प्रस्तुतिका अझ सबलता थपिँदै जाओस् कृतिहरूमा । बिम्बात्मकता, कलात्मकता र शब्दसौष्ठवजस्ता काव्यसौन्दर्यसँग अबका दिनहरूमा मेरा प्रिय मित्रको साहचर्य थप सघन हुँदै जाने विश्वास गर्ने मनग्गे ठाउँ छ ।